သူ့လူငယ်အတွက် Demi Moore က
အားလုံးကတော့နာမည်ကြီးတွေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အထွတ်အထိပ်အဖြစ်ကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့ဆွဲဆောင်မှုရှိကြ၏။ မကြာခဏသူတို့ကိုပြုံးရယ်ခြင်းနှင့်စော်ကားအမည်ဝှက်အတန်းဖော် ပေး. , ခြံထဲကနေရုံကလေးများ - ဒါဟာသူတို့ထဲကအချို့စတိုင် icon များ, အလှတရား၏စံချိန်စံညွှန်းများ, ဒါပေမယ့်အစောပိုင်းကဖြစ်လာကြပါပြီယခုဖြစ်ပါတယ်။ အတူတူ, ငျြးမိန်းကလေး Demi Moore ကဖြစ်ခဲ့သည်။
Demi Moore ကကလေးတစ်ဦးအဖြစ်
သူမရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလုံးဝပျော်ရွှင်မိခင်နှင့်ဖခင်အရက်သမား, အိမ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်အရှုပ်တော်ပုံများရှိကြ၏နှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတစ်ချိန်ကတိုက်ခဲ့ရတာပါဟုခေါ်တွင်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူမ၏ပထွေးသတ်သေမကြာခင်မှာပဲသူမဟာသူမရဲ့ဖခင်ကသူမလာပါဘူး, သူ့ဇီဝဗေဒအဖေချက်ချင်းမွေးဖွားပြီးနောက်မိခင်မှသူတို့ကိုပစ်ချနှင့်ထောင်ဒဏ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိခဲ့၏။ ထိုကဲ့သို့သောအာရုံကြောစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်, Demi 16 နှစ်အတွင်းအိမ်တော်ကို left နှင့်မော်ဒယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသူ၏ပထမဦးဆုံးငွေရှာဖို့စတင်ခဲ့သည်။ အသက် 18 မှာသူမဒါတစ်ဦးတည်းဖြစ်ဖို့မဖြစ်ကောင်း, လက်ထပ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုမင်းသမီးဖြစ်လာဖို့, သူ Demi ပျက်ကွက်၏ဤအနက်ဆုံးသောတွင်းထဲကရတယ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ - သို့သော် Freddie Moore ကသူမကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားကြာရှည်မခံခဲ့ပါသည်, မိမိကုမ္ပဏီသူမ၏အရက်နှင့်သာကလေးဘဝအိပ်မက်၏ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
လူငယ်နှင့် Demi Moore ၏အလှတရား၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
တစ်ပူပအတိတ်နေသော်လည်း Demi Moore ကဟောလိဝုဒ်အတွက်အလှဆုံးနဲ့ sexy မင်းသမီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိအ 52 နှစ်သမီးအရွယ်မှာတော့သူမအသက် 25 ထက်မပိုကြည့်! ထို့ကြောင့်, များစွာသောမိန်းမသူမငယ်ရွယ်နေဖို့စီမံခန့်ခွဲပုံကိုတွေးမိ? ၏သင်တန်း, အမြိုးသမီး၏ပစ္စုပ္ပန်ပုံသဏ္ဍာန်ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမပါဘဲမဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အများကြီးအောင်မြင်ရန်စီမံခန့်ခွဲ။ တစျခြိနျအခြို့သောသူမက၎င်း၏မှဇိမ်ခံကျေးဇူးတင်စကားကြည့်ဦးဇော်လင်းက ငယ်ရွယ်ခင်ပွန်း Ashton က Catcher (သူ Demi 16 နှစ်ထက်အသက်ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်) - ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ချိုးပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သောဆွေးနွေးချက်မပြောဘဲနေကြ၏။
ဒါပေမဲ့တချို့လူငယ်လျှို့ဝှက်ချက်များကို Demi Moore က, က may အဖြစ်ရှိသေးကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကို၏ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်အများစုကုန်ကြမ်းအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အစားအစာလတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အသီးအနှံ, အခွံမာသီး, ဖျော်ရည်, နံ့သာများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပေါ်အခြေခံသည်။ တခါတရံသငျသညျငါးသို့မဟုတ်အသားမတတ်နိုင်ပေမယ့်သင့်ရဲ့အစားအစာ၏ထက်ဝက်ပဲကုန်ကြမ်းအစားအစာများဖြစ်သင့်သည်။ မင်းသမီးကအလားတူအစားအစာပေါ်နေဖို့ရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းဝန်ခံသည်, သို့သော်ရလဒ်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေသငျသညျစောငျ့ရှောကျမည်မဟုတ်။ ဒါ့အပြင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမှန်မှန်ကြံ့ခိုင်ရေးကလပ်သွားရောက်လေ့လာနှင့်ပျားရည်ထုပ်ပိုးပြီးပါစေ။ မျက်နှာပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ပြဿနာဒေသများဆပ်ဖို့ကောင်းပြီ, ပင် elastic 50 ကြည့်၏အသက်အရွယ်မှာအရေပြားအကြောင်း, ၎င်း၏တစ်ဦး moisturize ရမယ်, အနည်းဆုံးမိနစ် 20 နေ့ဖြစ်၏။
25 mascots ၏ဓားစာခံဖြစ်ယူကြသူနာမည်ကြီးတွေထဲကအများစုဟာအယူသည်း
Gwyneth Paltrow လျှို့ဝှက်စွာ Brad Falchuk လက်ထပ်
15 အောင်မြင်သော Photo-ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ: စျေးအကြီးဆုံးအနုပညာရှင်ဓါတ်ပုံတွေကိုမည်မျှကုန်ကျ?
ဂျေ Lo ဒူဘိုင်းအတွက် afterparty မှာ "မျှော်ကြည့်"
မှူးမတ်ဟယ်ရီနဲ့ William "Star Wars" က၏စတူဒီယိုလည်ပတ်ခဲ့
Bella Hadid နှင့် Alexis Ren ကြော်ငြာပြက္ခဒိန်အချစ်၌ထငျရှား: အလေးနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အချိန်
ကလေးတွေနဲ့အတူအဆိုတော် Gwen Stefanie နှင့် Blake က Shelton ဟာအီစတာဝန်ဆောင်မှုတက်ရောက်ခဲ့သည်
Paul Walker ၏ဇနီး
Harvey Weinstein ဂျက်စီကာ Chastain wear Marchesa ဆင်မြန်းအတင်းအကျပ်
ကလေးမွေးစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. Blake က Lively အတွေး?
ကြိုးစားနေမထိခိုက်: ခင်မင်သိကျွမ်းသည့်ကဖေးဆိုင်ထဲမှာမိန်းကလေးနှင့်အတူ Brad Pitt
သားသမီးတို့အဘို့ Echinacea - ကိုယ်ခံစွမ်းအားတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ကာကွယ်ရေး
လူတိုင်းသိသင့်ကြောင်း 17 အံ့သြဖွယ်အချက်အလက်များ
တိုနီဘလဲ Waldorf ၏စတိုင်
Hypokalemia - လက္ခဏာများ
တစ်နေ့လျှင်အဆိုပါရေမွှေး Kim Kardashian ကသတင်းများရောင်းချမှုတွင် $ 10 သန်းရရှိခဲ့ပြီး
အမြစ်သီးနှံများ၏လျှောက်လွှာများအတွက်အရသာများနှင့်မတူညီစိတ်ကူးများ - beets ထံမှဟင်းလျာများ
အဆိုပါ Hornet ဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လိုနေသလဲ?